ခင်မောင်ရင် | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: ခင်မောင်ရင်
Painting Collections – Kin Maung Yin
June 14, 2014 by lanolay	Leaveacomment
Categories: Paintings | Tags: ခင်မောင်ရင်, kin maung yin, KMY, Painting | Permalink.
၂၀၁၁ လက်ရာများ (ခင်မောင်ရင်)
• Minor distortions have occurred during image refinements.
• Color Settings: Adobe RGB (1998)
• Many Thanks: KPS.
Categories: Paintings | Tags: ခင်မောင်ရင်, ပန်းချီ, Khin Mg Yin, lanolay, Painting | Permalink.
နေသာသော နေ့တစ်နေ့မှာ မင်းလုလင်တစ်ယောက်သည် လူပြက်တစ်ယောက်နှင့် အတူလာ၏ ။ တနင်္ဂနွေနေ့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက် တွဲဖက်ညီလှ၏။ အရပ်ရှည်ရှည် လူတစ်ယောက် တောအုပ်ထဲမှာ တုတ်တစ်ချောင်းနှင့် လမ်းလျှောက်နေ၏။ သူတို့ လက်သည်းခွံမှာ ဘာမှမရှိသော်လည်း သစ်ရွက်များသည် နှုတ်သီးနှင့် လေချွန်ကြ၏။ Continue reading →
ပေါ်ဦးသက် ထရမ်းပက်ဝယ်ခြင်း (ခင်မောင်ရင်)
(၁၉၃၆ - ၁၉၉၃)
“တစ်ဖက်သားကို ချမ်းမြေ့စေ … ဖော်ရွေသော မျက်နှာလေးတွေ … အကြင်နာရောင် သန်းကာလေ … အလှပန်းပွင့်ပါတဲ့မေ …”
ကျွန်တော်သည် (၂၄)လမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်ရှိ တိုက်ခန်းပေါ်သို့ လှေကားအတိုင်း တက်လာသည့်အခါ ပေါ်ဦးသက် သီချင်းဟစ်နေသံကို ကြားရသည်။ ထုံးစံအတိုင်း သူသည် မြို့မငြိမ်းသီချင်းများကို သီဆိုလေ့ရှိသည်။ ဧကန္တ၊ သူ ပန်းချီဆွဲနေသည်ဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်သည် အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်၏။ သူသည် သီချင်းဆိုနေသည်ကို မရပ်ဘဲ သူဆွဲနေသည့် ပန်းချီကားကို ဆက်လက်၍ ဆွဲနေ၏။ “မနက်ဖြန် ပေးရမယ့် ပန်းချီကား ဆယ်ကားလုံး ပြီးပြီလား။”
“ကိုးကားပြီးပြီ။ တစ်ကားပဲ ကျန်တော့တယ်။” သူသည် ကျွန်တော့်အားကြည့်၍ ပြုံးနေသည်။
“ဒါဖြင့် အဲဒီဆီဆေးကားက ဘာလုပ်ဖို့တုန်း”
“ကိုယ်ဆွဲချင်လို့ ဆွဲတာ။ လူများမှာတာတွေ ငြီးငွေ့လို့။”
“စိတ်ချပါ။ ပြီးအောင်လုပ်မှာပါ။ စိတ်လွတ်လပ်သွားအောင် ခဏလေး ပြောင်းလုပ်တာ။ မင်းက ပန်းချီဆွဲတာကို စက်ရုပ်လို မှတ်နေလား။”
“မမှတ်ပါဘူး။ ကဲ … ကဲ ပြီးအောင်လုပ်”ဆိုပြီး နောက်ဖေးသို့ ကျွန်တော် ခဏ၀င်လိုက်၏။ ထိုအခါ လူတစ်ယောက် ၀င်လာသည်ကို ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရ၏။ ထိုသူ မည်သူမည်ဝါ ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်မသိသေးပါ။
Categories: Articles, Paintings | Tags: ခင်မောင်ရင်, ပေါ်ဦးသက်, Khin Mg Yin, Paw Oo Thet | Permalink.
အနုပညာ … စာ – Paintings #3 (ခင်မောင်ရင်)
October 24, 2010 by lanolay	Leaveacomment
အနုပညာ … စာ – Paintings #2 (ခင်မောင်ရင်)